तुइन घटनाबारे बल्ल भारतले मुख खाेल्याे, उल्टै दियो ३ कराेड नेपालीहरुको पारो तात्ने यस्तो अभिव्यक्ती !
September 2, 2021 N88LeaveaComment on तुइन घटनाबारे बल्ल भारतले मुख खाेल्याे, उल्टै दियो ३ कराेड नेपालीहरुको पारो तात्ने यस्तो अभिव्यक्ती !
काठमाडाैं । दार्चुला घटनाबारे भारत बल्लतल्ल बोलेको छ । भारतीय एसएसबीको ज्यादती रहेको तुईन घटनाबारे प्रतिक्रिया दिदै भारतले नेपाल सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले बनाएको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको हो । स्थलगत अध्ययन सकेर नेपालले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई भारतले अस्वीकार गरेको हो । उनले उक्त प्रतिवेदनलाई नेपालको आन्तरिक प्रतिवेदन भन्दै त्यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ […]
कुलमानको नियुक्तिमा सरकारले नै कीर्ते गरेको खुलासा, जनमनका हिराे कुलमानलाई प्रचण्ड देउवाले जिराे बनाउने भए
September 2, 2021 N88LeaveaComment on कुलमानको नियुक्तिमा सरकारले नै कीर्ते गरेको खुलासा, जनमनका हिराे कुलमानलाई प्रचण्ड देउवाले जिराे बनाउने भए
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्दा कीर्ते गरेको पाइएको छ । घिसिङको नियुक्तिमा सरकारले गलत बाटो प्रयोग गरेको खुलेको हो । कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारसँग जवाफ मागेपछि पठाइएको पत्रमा नै घिसिङलाई गलत बाटोबाट नियुक्ति गरेको प्रष्ट देखिन्छ । […]
नारायणकाजी र गिरीराजमणि पोखरेल दलबल लिएर एमाले प्रवेश गर्दै ? एमालेमा पाउँदैछन् यस्ताे जिम्मेवारी
September 2, 2021 N88LeaveaComment on नारायणकाजी र गिरीराजमणि पोखरेल दलबल लिएर एमाले प्रवेश गर्दै ? एमालेमा पाउँदैछन् यस्ताे जिम्मेवारी
काठमाडाैं । यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र चर्किएको छ । नारायणकाजीलाई प्रवक्ताबाट हटाईएपछि माओवादीभित्र रडाको मच्चिएको हो । नारायणकाजीले दलबलसहित पार्टी नै परित्यागको निर्णय सम्मको तयारी भएको समाचार बाहिरिएपछि खुमलटार तरंगित बनेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टीभित्र निकै अपमानित भएर बसेका छन् । मन्त्री बन्छुभन्दै खुट्टा उचालेर बसेका श्रेष्ठलाई हुँदा खाँदाको पदपनि […]
September 2, 2021 September 2, 2021 N88LeaveaComment on विवाहपछि महिलालाई हुन्छ यी ५ कुराको पछुतो !
काठमाडाैं । विवाह हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण फैसला हो, जुन सोच विचार गरेर मात्र लिनु पर्दछ। धेरै जसो महिला विवाहपछि नयाँ परिवेशमा आफूलाई लैजाने गर्दछन्। यसमा धेरै जसो महिला यस्ता हुन्छन्, जसले पछि गएर आफूले गरेको फैसलामा पछुतो मान्ने गर्दछन्। कुनै समय त उनीहरुलाई विवाह गरेमै पछुतो हुने गर्दछ। आउनुहोस् जानौँ विवाहपछि प्राय महिलालाई कुरा […]
देउवाले नै उप–सभापति मनोनित गरेका निधी भारतको सेटिङमा मैदानमा ! आफ्नै बिरालो आफैसित म्याउँ
September 2, 2021 N88LeaveaComment on देउवाले नै उप–सभापति मनोनित गरेका निधी भारतको सेटिङमा मैदानमा ! आफ्नै बिरालो आफैसित म्याउँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा धेरैले आफ्नो उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । पार्टीका फुच्चे नेतादेखि लिएर प्रभावशाली नेताहरु प्रतिष्पर्धामा आफूलाई अघि सार्दै आएका छन् । कोटामा बल्लतल्ल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जितेका कल्याण गुरुङ पनि केन्द्रीय सभापति उठ्छु भन्न थालेका छन् । आफूलाई स्वाभाविक उम्मेदवार हुँ भन्ने धेरै बोलेका पनि छैनन् । […]
September 2, 2021 N88LeaveaComment on पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको क्षेत्रका प्रदेश सांसद, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष एकीकृत समाजवादीमा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा निर्वाचित क्षेत्रका दुवै प्रदेशसभा सदस्य नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तिर लागेका छन् । बाँस्कोटा काभ्रे–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । उनी निर्वाचित क्षेत्रका दुवै प्रदेशसभा सदस्य एकीकृत समाजवादीतिर लागेका हुन् । काभ्रे–२ (क) बाट निर्वाचित लक्ष्मण लम्साल र (ख) बाट निर्वाचित बसुन्धरा हुमागाईं एकीकृत समाजवादीमा […]
सबैभन्दा कम उमेरमा अर्बपति बनेकी एलिजाबेथ होम्जले कसरी सिलिकन भ्यालीलाई झुक्याइन् ?
September 2, 2021 N88LeaveaComment on सबैभन्दा कम उमेरमा अर्बपति बनेकी एलिजाबेथ होम्जले कसरी सिलिकन भ्यालीलाई झुक्याइन् ?
बीबीसी । चर्चित फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार उनी “विश्वको सबैभन्दा कम उमेरमा आफैँ कमाएर अर्बपति बनेकी महिला” थिइन्। अर्को चर्चित पत्रिका इन्कले उनको तस्बिर कभरमा राखेर लेखेको थियो: “अर्की स्टीभ जब्स”। सन् २०१४ मा ३० वर्षकी एलिजाबेथ होम्ज शिखरमा थिइन्। स्ट्यान्फर्ड विश्वविद्यालय बीचमै छोडेकी उनले रोग निदानको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने दाबी गर्ने नौ अर्ब अमेरिकी […]
वागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्ठलक्ष्मी शाक्य आउट, राजेन्द्र पाण्डेको इन्ट्री !
September 2, 2021 N88LeaveaComment on वागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्ठलक्ष्मी शाक्य आउट, राजेन्द्र पाण्डेको इन्ट्री !
काठमाडौं । वागमती प्रदेशका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आफू नै मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएको बताएका छन् । मंगलबार वागमती प्रदेशमा रहेका एमालेका ५६ मध्ये १२ जना सांसदले माधव नेपालको पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका छन् । नयाँ पार्टीको पक्षमा लाग्नेहरुमा राजेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, लक्ष्मण लम्साल, बसुन्धरा हुमागाई, रमा आले मगर, बसन्तप्रसाद मानन्धर, […]
चीनले मिचेको भनेको भूमिमा नेपाली झण्डा गाड्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन !
September 2, 2021 N88LeaveaComment on चीनले मिचेको भनेको भूमिमा नेपाली झण्डा गाड्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन !
काठमाडौं । चीनले नेपाली भूमि मिचेको विषय कांग्रेसका नेताहरुले उठाउँदै आएका थिए । खासगरी नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा गएको टोलीले चीनसँगको नेपालको सिमा विवादको विषयमा आवाज उठाएको थियो । सरकारले हिजोमात्रै हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । यसअघिको केपी शर्मा ओलीको सरकारले भने चीनले सिमा नमिचेको […]
मन्त्रिपरिषद विस्तारमा माकुनेले ल्याङल्याङ गरेपछि सत्तारुढ दलहरुबीच ल’फ’डा
September 2, 2021 N88LeaveaComment on मन्त्रिपरिषद विस्तारमा माकुनेले ल्याङल्याङ गरेपछि सत्तारुढ दलहरुबीच ल’फ’डा
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भदौं २३ गते अघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । बिहीबार सिंहदबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा पदभार ग्रहणपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट भएपनि त्यसबारे छलफल नभएको बताए । अध्यक्ष नेपालले भदौ २२/२३ गतेसम्म त मन्त्रिपरिषद विस्तारका बारेमा […]